Uma umzimba wakho nobuso kukhona izibazi ke lezi amaphutha uyozisingatha ijeli esiyingqayizivele Nuobisong. Amanxeba ukuletha asemrarweni futhi angagcina ukuzibona ngiyisiphukuphuku. Abantu siyesaba futhi besaba waphinda ukuthatha ezitaladini. Futhi, eziningi izinkinga ekuletheni AMANXEBA ngobuso bakhe, okusalayo ngemuva kokuphela nezinduna kanye namaqhubu. Gel Nuobisong elwisana sombala izindawo nezinye ukukhubazeka isikhumba.
izibazi Olubanzi abantu ufihle ngaphansi izingubo. Amanxeba singenzeka ngenxa yezizathu ezihlukahlukene: ukusikeka, ukusha, amanxeba. Cosmetologists bathole indlela kulesi simo. Ngo ukudayiswa okukhethekile cream izibazi nezibazi Nuobisong.
Izibazi kuyinto ezicutshini ukuthi kwenzeka kusayithi we ukusonteka kwesikhumba. Ubonakala endaweni imihuzuko ezinkulu, izindawo, imisebenzi, kanye nezifo ezithile. Njengoba sekunama-ikhambi elinjalo jikelele njengoba Nuobisong ukhilimu ukususa izibazi, unga ngokushesha futhi kalula.
Muva nje, babugcwele izisihla alithandeki ayikwazanga ukuqeda kuphela esebenzisa inqubo laser. Izibazi nge laser kuyinto inqubo yezimonyo buhlungu futhi kube yizindleko.
Abakhiqizi ukhilimu ehlukile kuqeda izibazi, induna kanye lesikhumba kwesikhumba, kutuswa ukusebenzisa ukhilimu ku izibazi fresh ukuthuthukisa isenzo ngempumelelo.
Esebenzisa ngokusebenzisa indlela
Cream babugcwele izisihla okumele asetshenziswe nokukhanya ukuwabhulasha ukunyakaza kusayithi yesibazi noma sesibazi. Massaging ubamba kuze kube ukhilimu is egxile ngokuphelele esikhunjeni. Ungakwazi ukushiya ukuba yome ngokwemvelo, kodwa ukuze kuzuzwe umphumela oyifunayo, ukhilimu kufanele wagcoba ngokuphelele.
imiphumela emibi izidakamizwa ongenakho ngenxa yokuba khona lichaza ekwakheni zemvelo, izithako ephephile. Kodwa kukhona amathuba ukusabela iguliswa izidakamizwa. It kubonakala ngesimo ububomvu kanye ukuqubuka endaweni yesicelo. Uma ufaka isicelo yimuphi ukungakhululeki, ovuthayo nangokushisa komzimba, isicelo ukhilimu kungcono ukuyeka.
Ukuze uhlole ukuthi kungenzeka ukusabela iguliswa izindlela ezidingekayo awubeka isihlakala sakho noma omunye ingxenye yomzimba nge isikhumba olubucayi. Uma ngemuva kosuku kusayithi kwesicelo ayibonakali ububomvu, ukulunywa noma esivuthayo, ikhethelo labantu, izibazi ingasetshenziswa ngaphandle kwemingcele.
Uma ukusabela iguliswa incane kakhulu, ngakho ungakhathazeki. Lokhu kungenxa compounds ayinangozi Nuobisong izindlela. Ukhilimu ingasetshenziswa kanye nezinye okhilimu, izidakamizwa kanye nemithi.
Sebenzisa kumele kube izinyanga 6, okuyinto Yiqiniso egcwele ukwelashwa. Kodwa kumelwe acabangele kushuba ivolumu surface abathintekayo. Uma yesibazi incane, ngenkathi uhlelo lokusebenza le-ayisikhilimu zingancishiswa ngu cishe 2 izikhathi.
Isiza kusukela ukungapheleli isikhumba ezincane kusho Nuobisong - Cream babugcwele izisihla, okuyinto Izibuyekezo bathi ngosizo abantu abaningi baye ngokuphelele ngiyilahle yobudala izindawo, izibazi. Lesi simo esiyingqayizivele sibangelwa zenzeke isikhathi esifushane.
Incazelo ukhilimu izibazi
Umuthi ibekwe ebhokisini amakhadibhodi ehlotshiswe enhlobonhlobo. Ngokubukeka kuba izinga okuqinile kanye eliphezulu. On the phambi ibhokisi has igama ikhethelo izibazi, kanye ulwazi mayelana ezweni lendabuko. Kusho enziwa e China.
Konke okunye ukwaziswa okulotshwe sesiShayina ukuthi abathengi abaningi isiphazamiso ukufunda yazi nale izidakamizwa. Ngo olunye ulimi banikwa izincomo ukusetshenziswa ukhilimu nosuku lokuphelelwa kwalo isikhathi.
Izindlela tube inobungako 15 angu. Kodwa ngenxa ukumuncwa ngokushesha isisindo kwanele isikhathi eside. I tube eyenziwe ngepulasitiki elithambile, okwenza kube lula ukungena ngaphandle ukhilimu. Impilo izimali kuyinto ezingu-12 kusukela kuvulwa tube. I tube has a cap isikulufa futhi itjhubhu, okuyinto ikuvumela ukuba ukulawula inani ukhilimu extruded.
Ibhokisi has a uyiqhamukela ngasohlangothini, okufakazela ikhwalithi ejenti zokwelapha. Ngaphakathi ebhokisini, iza imfundo ngolimi okungelona lwakubo.
Ngenxa absorbency osheshayo yayo ukhilimu ingasetshenziswa isikhathi eside, it konga imali. Ngemuva kwesicelo yayo phezu izingubo futhi emzimbeni engashiyanga iminonjana nezehlukaniso.
In ekulweni ukungapheleli isikhumba esincane ukusiza Nuobisong (ukhilimu). Izibuyekezo emihle nemibi imoto ingafundwa esihlokweni. Ngokusho eziningi, bonke bangabafowabo azinake.
Okokuqala udinga ubheka ukhilimu "Nuobisong" Izibuyekezo ngokhiye omuhle. Abaningi kuqashelwe ukuthi izindlela has a ukuthungwa esithambile futhi ajabulisayo. Cream ubhekana ukuvuvukala fresh futhi umonakalo, kuyashesha ukuphulukisa yabo. evele Eshiswa livela koqweqwe. Njengoba umkhiqizo wethulwa emakethe yokuthengisa eRussia muva nje, bese ukhilimu Nuobisong Izibuyekezo iphambene. Lokhu kungenxa, okungenzeka kakhulu, izakhiwo ngazinye abathengi kwesikhumba.
Ngaphezu kwakho konke lokhu okungenhla, ikhethelo labantu, isibanda has a emnandi, ukukhanya kanye ukunambitheka fresh ukuthi asisho usike ekhaleni namehlo. Ukugcina ubuso bakhe imihuzuko, induna ingasetshenziswa Nuobisong imali yenkampani. Cream ayinakho nephunga zamakhemikhali, kunalokho, iphunga layo esithambe futhi kuqabula. iphunga avulekile ngenxa yokuba khona izingxenye zemvelo. Ngo izindlela ebusika ivikela isikhumba omiswe kanye nokupholisa.
Ukuze sihlole wonke amathuba zomuthi, kudingeka ufunde mayelana Nuobisong Susa Izibazi Cream Izibuyekezo. okhilimu abanikazi abaningi baqaphela ukunyamalala ukulunywa futhi ububomvu emva isicelo. Ijeli kusukela izibazi ubhekana ukungapheleli isikhumba ezincane.
Nuobisong (ukhilimu): libuyekeza okunye
Abanye bathi abahloli ukhilimu ukuthi wayengafuni sibhekane ngokuphumelelayo izinjongo ezishiwo. Ukhilimu akazange zakwazi ukwenza lokho okulindelwe abathengi ezimbalwa, njengoba awufikanga izibazi noma izindawo sombala noma babugcwele izisihla.
On the isembozo kukhona Ukwakheka ukhilimu. Abathengi ngeke bakwazi ukubona, kulokho wenza ithuluzi okuyinto izingxenye kusetshenziswa ekukhiqizeni yayo. Abathengi akakuthandanga Nuobisong ejenti (ukhilimu), ukubuyekezwa, kuyacaca ukuthi okungekuhle. Kunalabo ukuthi udumele kuye futhi bakholelwa ukuthi imali usuke udlale ngesikhathi.
Ngokujwayelekile, lingahunyushwa baphetha ukuthi ithuluzi is hhayi njalo wakwazi ukubhekana kangcono nale imisebenzi - ke Nuobisong (gel). Izibuyekezo sakhe diametrical ngakho futhi ushiye umbono akuyona umkhiqizo izinga njalo.
Ukuvumelana ka ikhethelo izibazi
Ukhilimu has a ukukhanya, ithenda ukuthungwa okuyinto extruded kahle futhi elula. ukungaguquguquki eliwumbhubhudlo ivumela ugaye ejenti encane ipea phezu endaweni enkulu isikhumba abathintekayo. Lokhu kwenza izidakamizwa ngokwanele ukonga ukuyisebenzisa. ukuthungwa Nice zibhebhetheka phezu kwesikhumba futhi ngobumnene umboza wakhe.
Cream babugcwele izisihla is ngokushesha wakwamukela futhi ushiya isikhumba akhanye futhi ifilimu. Ukuze ikhethelo AMANXEBA kwadingeka isenzo ngempumelelo phezu kwesikhumba kuyadingeka ukubeka umthamo omncane imali. Ngemva kwalokho kufanele basakaza phezu kobuso yesibazi noma amnyama.
Ukhilimu wakwamukela futhi bome emizuzwini engu-5, elibonisa ukuthi Nuobisong kusho isenzo okusheshayo. Uphenyo ukungaguquguquki omuhle of ayisikhilimu. It has a ukuthungwa umfaniswano omhlophe noma beige. Isakhiwo umkhiqizo kufanele kube khona izigaxa noma izinhlayiya angaphandle.
Yini esisiza ukuba sibhekane ukhilimu
Can Nuobisong kusho ukususa isibazi? Cream ubhekana sombala amabala betshisa? Lezi zinkinga ehlupha abantu ngala ukungapheleli isikhumba. abakhiqizi ukhilimu zithi ithuluzi yabo ehlukile ngokuphelele ilungisa amaphutha amaningi. Lezi zihlanganisa warts, izibazi, izibazi, amnyama, nezinduna kanye namaqhubu. Nuobisong (ukhilimu izibuyekezo, njengoba uke waphawula, ngempela eziphikisa) ubhekana amaphutha amancane. Kodwa awukwazi ukuqeda izibazi zisetshenziswa ezinkulu.
Esebenzisa usizo olukhulu kubantu abane-isikhumba esomile kanye chapped. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ebusika. Nge isikhumba uyaxebuka ubhekana gel Nuobisong. Izimpendulo ngaye zisikisela ukuthi ejenti akusho ungenwa isikhumba futhi enqanda ukuvuvukala nezilonda. Gel izibazi aqede ukulunywa futhi esivuthayo, ububomvu futhi aqede normalizes ibhalansi amanzi. Ngemuva kokufaka isicelo ukhilimu engazizwa ukusikwa futhi isikhumba ukoma.
Cream Nuobisong izibazi: iqiniso noma amanga
Uma ucabangela nemibono nabantu asebeke babasebenzisa lokhu izidakamizwa, singakwazi iziphetho ezilandelayo:
It has a elithambile, ukuthungwa emnandi umzimba.
Ngokuphumelelayo sibhekane nokungapheleli isikhumba esincane.
It has a iphunga elimnandi, okungezona allergenic, njengoba yenziwe ngezithako zemvelo.
Akabashiyi emamaki okunamafutha noshukela akhanye, it is ngokushesha angena isikhumba.
Ithuluzi alubuqedi eside futhi izibazi osekukade.
Kwemali esetshenziswe sikhungo, kungenzeka wachitha ngeze.
Ayikho ithuba ukufunda noma yimaphi imiyalelo noma okuqanjiwe, noma indawo zokukhiqiza.
Omunye ethile zomuthi oqabulayo izibazi iwukuba uyithenga Pharmacy nezitolo eRussia akunakwenzeka. Ukuze ube umnikazi ukhilimu isimangaliso, udinga oda it in angaphandle iwebhusayithi umhlinzeki.
ukhilimu izindleko izibazi
Ngokusebenzisa umphakeli angaphandle wamafutha Nuobisong ivolumu 15 mg ayatholakala eRussia ruble 300 noma ngaphezulu. Kulahleke tube inyanga. Uma sicabanga ukuthi akanawo izakhiwo absorbable, izindleko impela high.
Izindleko wamafutha Nuobisong izibazi sokuboshwa izindleko nezinye izimali efanayo. Kodwa uma kuqhathaniswa amanani ukuhlinzwa plastic kanye laser izinqubo, umuthi kalula ithuluzi litholakala ukulwa ne izibazi, induna kanye lesikhumba izindawo.
Lapho ukuthenga ikhethelo izibazi
izidakamizwa IsiZulu kusukela amaphutha isikhumba angathengwa at esitolo online. Udinga ukufunda izibuyekezo esitolo, ukugwema abaxhumanisi abonakele kanye nabaphakeli. Uma oda ukhilimu Nuobisong kusukela umlamuli engathembekile, kungenzeka ukuthenga mbumbulu, engalimaza emzimbeni. Imikhiqizo eminingi mbumbulu zenziwa kusukela izingxenye enobungozi angabulala umuntu.
Abadayisi izibazi wamafutha ukunikela ukulethwa yizithunywa noma ngokusebenzisa Russian Post. Ukhilimu ilethwa ngenyanga ngemuva kokuthenga. Oda wamafutha yezokwelapha kungenzeka noma ubani ingxenye ahlukene of Russia.